Alcatel 1,3 နှင့်5ကို MWC 2018 တွင်တရားဝင်တင်ဆက်သည် Androidsis
Android Go ကိုအသုံးပြုသောပထမဆုံးအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သော Alcatel 1X အသစ်အကြောင်းသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပြီးပါပြီ။ သို့သော်ပြင်သစ်ကုမ္ပဏီသည်ဤ MWC 2018 ကိုသတင်းများစွာဖြင့်ကြီးမားသောလမ်းဖွင့်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်, သူတို့၏တယ်လီဖုန်းတင်ပြခဲ့ကြသည် သူ့ရဲ့အသစ်စီးရီး,3နှင့် 5။ CES 2018 တွင်ဇန်န ၀ ါရီလတွင်ကြေငြာခဲ့သည်။
ယခုအမှတ်တံဆိပ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားဤစီးရီးများနှင့်သက်ဆိုင်မည့်ဖုန်းများဖြင့်ဖော်ပြသည်။ သူတို့တွင် Alcatel5သို့မဟုတ် Alcatel 3V ကိုတွေ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသိရှိနိုင်ခဲ့သည့်ဖုန်းများနှင့်ယခုတရားဝင်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်၎င်းတို့သတ်မှတ်ချက်များအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့သိရှိပြီးဖြစ်သည်။
TCL သည်ပြင်သစ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုအချိန်အတော်ကြာပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည်။ ဤအချက်သည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုကောင်းကောင်းအကျိုးပြုနိုင်ပုံရသည်။ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုလက်ရှိဒီဇိုင်းများနှင့်ကောင်းမွန်သောသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတော်လေးဆွဲဆောင်မှုရှိသောစျေးနှုန်းများရှိသောဖုန်းများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုထားခဲ့သောကြောင့်။ ဒီတစ်ခေါက်သူတို့ဘာတွေယူလာခဲ့တာလဲ
4 စျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှု Alcatel 1,3and 5
ဤအခမ်းအနားတွင်ကုမ္ပဏီမှတင်ပြခဲ့သောအရည်အသွေးသုံးခုပါ ၀ င်သည့်အရည်အသွေးမြင့်စီးရီးများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့စတင်ဖွင့်လှစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းနှင့်အပြည့်စုံဆုံးသတ်မှတ်ချက်များရှိသောအရည်အသွေးရှိသောဖုန်းကိုရင်ဆိုင်နေရသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောစျေးနှုန်းဖြင့်သရဖူဆောင်းထားသည်။ ဒါကြောင့်စျေးကွက်ထဲမှာဒီဖုန်းဟာကွာဟချက်တစ်ခုရှိနေပါတယ်။ သူ၏ထူးခြားချက်တစ်ခုမှာသူဖြစ်သည် SIMGANIC ဒီဇိုင်းဘာသာစကား. ဒါကဘာကိုဆိုလိုသနညျး စက်မှု, ရိုးရှင်းသောနှင့်အော်ဂဲနစ်။
Alcatel5သည်အပြည့်မြင်ကွင်းမျက်နှာပြင်၏ဖက်ရှင်ကိုလိုက်နာရန်ကတိကဝတ်ပြုထားသည်18:9မျက်နှာပြင်အချိုးအစားကိုဖော်ပြသည်။ ဒါပေမယ့်ဒီကိရိယာကကျွန်တော်တို့ကိုအသေးစိတ်အချက်အလက်များစွာနဲ့ချန်ထားပါတယ်။ ဤရွေ့ကားအမှတ်တံဆိပ်၏အသစ်သောစမတ်ဖုန်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို:
နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ Alcatel 5
operating system အန်းဒရွိုက်7Nougat
ဖန်သားပြင် ၅.၇ လက်မ IPS panel နှင့် HD + resolution (5.7 x 1.440 pixels)
Processor ကို ရှစ် core MediaTek MT6750 (4x 53 GHz Cortex-A1.5 + 4x 53 GHz Cortex-A1.0)
နောက်ကင်မရာf/ 12 aperture LED Flash autofocus ပါသော 2.0 MP
ရှေ့ကင်မရာ 13 +5MP ကျယ်ပြန့်သောထောင့်နှင့် LED Flash ပါသော
ဆက်သွယ်မှု dual SIM အသုံးပြုနိုင်သည့် Bluetooth Wi-Fi aGPS နှင့် USB Type-C တို့ဖြင့် LTE
အခြားအင်္ဂါရပ်များ NFC လက်ဗွေဖတ်စက် ၁၀၀ မှတ်မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုခြင်း
ရှုထောင့် 152.35 x ကို 71.1 x ကို 8.45 မီလီမီတာ
အလေးချိန် 144 ဂရမ်
စြေး 229.99 ယူရို
ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်လက်ရှိပြိုင်ဆိုင်မှုရှိသောစက်ပစ္စည်းနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်။ စားသုံးသူများအနေဖြင့်ဒီဇိုင်းနှင့်မျက်နှာပြင်အချိုးကဲ့သို့သောအပြုသဘောဆောင်သောတန်ဖိုးကိုရှုမြင်နိုင်သည့်အချက်အချို့ရှိသည်။ လက်ဗွေဖတ်စက်ရှိခြင်းအပြင်။ အံ့သြစရာကောင်းတာကဒီ Alcatel5ဟာနောက်ကင်မရာနောက်ဖက်မှာမဟုတ်ဘဲရှေ့ဘက်ရှိကင်မရာနှစ်လုံးနှင့်လောင်းသည်။
ဤယခင်မော်ဒယ်၏အောက်တွင်ရှိသည့်အမှတ်အသားမှာအမှတ်တံဆိပ် MWC3တွင်တင်ပြခဲ့သော ၃ စီးရီးဖြစ်သည်။ ဒါဟာယခင်တစ်ခုထက်အနည်းငယ်ပိုမိုရိုးရှင်းတဲ့အကွာအဝေးဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်၎င်းသည်ဒီဇိုင်းကောင်းများရှိပြီးအလွန်လန်းဆန်းစေပြီး 18:9အချိုးအစားဖြင့်မော်ဒယ်များကိုထပ်မံတင်ပြသည်။ ထို့အပြင်ဤဒီဇိုင်းကိုကောင်းမွန်သောသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောစျေးနှုန်းဖြင့်လိုက်ပါသွားသည်
ဒီအကွာအဝေးမှာကျနော်တို့တူညီတဲ့စမတ်ဖုန်း၏မော်ဒယ်သုံးခုကိုရှာပါ။ အခြေခံဗားရှင်းကတော့ Alcatel3ဖြစ်ပြီးကျန်နှစ်ခုကတော့ 3V နှင့် 3X တို့ဖြစ်တယ်။ ၎င်းတို့သည်ဖြည့်စွက်မှုများရှိသောယေဘူယျအားဖြင့်အနည်းငယ်ပိုကြီးသည့်မျက်နှာပြင်များဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့သုံးခုအကြောင်းပိုမိုပြောပြ:
ဒါဟာအမှတ်တံဆိပ်၏ဤအလယ်အလတ်အကွာအဝေး၏အခြေခံမော်ဒယ်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်အပြည့်အစုံမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ Alcatel 3
operating system အန်းဒရွိုက် Oreo
ဖန်သားပြင် 5.5 လက်မ 18:9HD + (1440X720 pixels) IPS
Processor ကို MediaTek MT6739 Quad Core Cortex-A53 1.45 GHz
ဆက်သွယ်မှု GSM UMTS LTE GPRS WiFi Bluetooth 4.2 NFC ဖြစ်သည်
အခြားအင်္ဂါရပ်များ Fingerprint sensor FM ရေဒီယိုသည်မျက်နှာ၏အသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြင့်သော့ဖွင့်ခြင်း
ရှုထောင့် 147.1 68.8 8.5 မီလီမီတာ
စြေး 149.99 ယူရို
၎င်းသည်ယခင်တစ်ခု၏အချို့သောအရာများကိုထိန်းသိမ်းထားသောကိရိယာဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ဒီဟာကသူ့ရဲ့ specs အပြည့်ပါ
Alcatel 3X နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ
operating system အန်းဒရွိုက် Nougat
ဖန်သားပြင် ၅.၇ လက်မ ၁၈: ၉ HD + (5.7X18 pixels) IPS
Processor ကို MT6739 Quad Core A5 (4 x 1.28GHz)
နောက်ကင်မရာ 13MP + 5MP
အခြားအင်္ဂါရပ်များ Fingerprint sensor Jack ၃.၅ မီလီမီတာအသံ FM ရေဒီယိုမျက်နှာပြင်အသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြင့်သော့ဖွင့်ခြင်း
ရှုထောင့် 153.5 71.6 8.5 မီလီမီတာ
စြေး 179.99 ယူရို
နောက်ဆုံးအနေနဲ့အကွာအဝေး၏နောက်ဆုံးအဖွဲ့ဝင်ဒီမော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ဖုန်းသုံးလုံးတွင်အကြီးမားဆုံးသောမျက်နှာပြင်ရှိခြင်းကြောင့်ထင်ရှားပြီးယခင်ဖုန်းနှစ်မျိုး၏ရောနှောမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကား၎င်း၏အပြည့်အဝသတ်မှတ်ချက်များဖြစ်ကြသည်
နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ Alcatel 3V
ဖန်သားပြင်6လက်မ 18:9အချိုး, 2K IPS resolution ကို
Processor ကို MediaTek MT8735 Quad-Core 4x A53 1.45 GHz
GPU ကို မာလီ T720 MP2
နောက်ကင်မရာ 12 +2အမတ်
ဆက်သွယ်မှု GSM UTMS LTE ဘလူးတုသ် 4.2 WiFi 4G NFC
အခြားအင်္ဂါရပ်များ လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာ Compass Face unlock
ရှုထောင့် 162 76 8.05 မီလီမီတာ
စြေး 189.99 ယူရို
ဤရွေ့ကားမော်ဒယ်သုံးခု Alcatel MWC 2018. မှာကျွန်တော်တို့ကိုတင်ပြတော်မူပြီအလယ်အလတ်အကွာအဝေး၏အင်္ဂါဖြစ်ကြ၏ထို့အပြင်ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီ၏အောက်ပိုင်းအကွာအဝေးပိုင်သည့်စက်လည်းရှိပါသည်။
အတွင်းကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ပထမဆုံးဖုန်းဖြစ်သော Alcatel 1X အကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပြီးပါပြီ Android Go ဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ ဒါပေမယ့်ဒီအကွာအဝေးအတွင်းမှာနောက်ထပ်ဖုန်းတစ်လုံးကိုငါတို့တွေ့တယ်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့ပြီးသောပုံစံနှင့်ဆင်တူသော်လည်းယခုအချိန်သည်အခြားဖုန်းကဲ့သို့ Android Go နှင့်အလုပ်မလုပ်ပါ။
စျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှု Alcatel 1,3and 5
ကုမ္ပဏီသည်ဤ MWC 2018. ကိုကောင်းစွာအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဤစက်ပစ္စည်းများကိုလည်းသိနိုင်ခြင်းအပြင်၎င်းတို့၏စျေးနှုန်းနှင့်ထုတ်လွှတ်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်များလည်းရှိနေပြီဖြစ်သည်။ ဤဖုန်းများအားလုံးကိုဝယ်ရန်နွေ ဦး အထိစောင့်ရမည်။ သော်လည်း, Alcatel5ကိုအနက်နှင့်ရွှေဖြင့် ၂၂၉.၉၉ ယူရိုဖြင့်စျေးကွက်အချို့တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ မကြာခင်မှာပဲအခြားစျေးကွက်တွေဆီရောက်တော့မှာပါ။
Alcatel3အကွာအဝေးကိုမေလတွင်ရောက်ရှိမည်။ ဖုန်း၏အကွာအဝေးအတိုင်းအမည်တူသောဖုန်းကိုယူရို ၁၄၉.၉၉ ဖြင့်ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ စဉ်တွင် 3X ကိုယူရို ၁၇၉.၉၉ ဖြင့်ရောင်းချမည်၎င်းသည်ဇွန်လတွင်ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သော်လည်း ဤအတောအတွင်းသူ 3V အချို့စျေးကွက်များတွင်ရရှိနိုင်ပါသည် 189,99 ယူရို။
အမှတ်တံဆိပ်၏အနိမ့်ဆုံးအကွာအဝေးအတွင်း, Alcatel 1X ကို ၉၉.၉၉ ယူရိုဖြင့်ရောင်းချသည် 1C ကတည်းကအတန်ငယ်စျေးနှုန်းချိုသာဖြစ်လိမ့်မည်နေစဉ် ယူရို ၈၉.၉၉ ကျသင့်မှာပါ။ ဝယ်လို့ရအောင်Aprilပြီလအထိစောင့်ရမယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Alcatel သည်၎င်း၏စီးရီး ၁၊ ၃ နှင့် ၅ သစ်ကို MWC 1 တွင်တင်ပြသည်